သူမရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို မီးခိုးရောင် နဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ခရစ္စတီးနားကတော့ သူမဘဝရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေမှာ အမှားတွေလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးသလို မှန်တာတွေလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ခရစ္စတီးနားဟာ သူမရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားကို မီးခိုးရောင် နဲ့ နှိုင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အမှားလုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေလည်းရှိသလို၊ အမှန် လုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ကျွန်မအတွက် တော့ မီးခိုးရောင်ဆိုတာ အဖြူနဲ့အမည်း အမှားနဲ့အမှန် ရောယှက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရောင် !!!!
လူသားတစ်ယာက်ဖြစ်သည့်အလျှောက်ဖြူစင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ထို့အတူ မိုက်မဲခဲ့ဖူးတယ်၊ မှားခဲ့တာတွေလည်းရှိသလို မှန်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ သဘာဝတရားကြီးကိုက ကျွန်မတို့မမွေးခင်ထဲက အဖြူနဲ့အမည်း၊ အလင်းနဲ့အမှောင်၊ နေ့နဲ့ည ၊အမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာချည်းကို ဒွန်တွဲပြသထားပြီးသားလေ။ ဒါကို ကျွန်မတို့က သိပ်ဖြူစင်လွန်းပါတယ်လို့ ဘာတွေဟန်ဆောင်ပြနေဖို့လိုသလဲ။ သိပ်မိုက်မဲလွန်းပါတယ်လို့ရော (တစ်ခါတရံမှားခဲ့ဖူးတဲ့ အမှားတချို့အတွက် )ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ဝေဖန်နေဖို့လိုသလဲ။ လူသားဆန်ရင် မှားတာတွေလည်း ရှိဖူးမယ်၊ မှန်တာတွေလည်းလုပ်ဖူးမယ်!!!! အမှား နဲ့ အမှန် Balance ညီအချိုးကျပါဝင်နေတာကိုက ဘဝရဲ့ သဘာဝ၊ ဘဝရဲ့အနှစ်သာရမဟုတ်လား" ဆိုပြီးတော့ မေလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေ (၅) နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ခရစ္စတီးနားက လူတချို့ဟာ ကိုယ်ကပဲ ကောင်းတာလုပ်၊ ကိုယ်ကပဲ အမြဲ မှန်တဲ့ လူတွေ၊ အတိတ်က အမှားတွေကို သင်ခန်းစာ မယူနိုင်ကြသူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"လူတချို့ကျသူတို့ကိုယ်သူတို့ သိပ်ဖြူစင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြနေတဲ့ အဖြူစွဲဝါဒတွေရှိတယ် ( ကိုယ်ဘဲအကောင်းကိုယ်လုပ်တာဘဲ အမြဲအမှန်လို့ထင်နေတတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေပေါ့)။ လူတချို့ကျပြန်တော့ တစ်ခါတရံမှားယွင်းမိလိုက်တာကိုဘဲ အတိတ်ကအမှားထဲကနေ ရုန်းမထွက်နိုင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင် Self confidence တွေ အောက်motivation တွေပျောက်ပြီး Dark circle ထဲမှာဘဲ ရုန်းမထွက်နိုငိတော့ဘဲနစ်မွန်းနေတာတွေရှိ တယ်" လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ခရစ္စတီးနား က သူမရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အရာတွေတိုင်းမှာ အမှားကို သင်ခန်းစာယူပြီး အမှန်ကို ရင်ဆိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်း အခုလို ပြောပြလာပါသေးတယ်။
" "There is no black or white....we are all shades of grey..... " တဲ့ဖတ်ဖူးတဲ့စာလေးနှစ်ကြောင်း !!!!! ဒါကြောင့်ကျွန်မကတော့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်ဘဝလမ်းခရီးမှာ အမှားရော၊ အမှန်ရော ရောယှက်ထားတဲ့မီးခိုးရောင်အဖြစ်နဲ့ဆက်လျှောက်မယ်။ မှားချင်လည်း မှားပါစေ အမှားထဲကသင်ခန်းစာယူမယ်။ မှန်ရင်လည်းအမှန်တရားအတွက်ရဲရဲရင်ဆိုင်မယ်။ ဟုတ်တယ်.....ကျွန်မ က မီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ် !!!!!(26th May ;20) 5:30 pm (Christina)" ဆိုပြီးတော့လည်း ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ COVID-19 ကာလမှာ We Love Yangon အဖွဲ့သားတွေနဲ့ အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ခရစ္စတီးနားဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ဗီဒီယိုလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိအချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေတုန်းပါပဲ။ အရပ်မြင့်မြင့် ခန္ဓာကိုယ်လှလှ လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးတွေထဲမှာ ခရစ္စတီးနားလည်း တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။